China 4J29-Kovar alloy strip Kovar bar / kovar sheet / kovar ityhubhu abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
4J29-Kovar alloy strip Kovar bar / kovar sheet / kovar ityhubhu
Amagama aqhelekileyo oRhwebo: Ingxubevange yeKovar, 4J29, UNS K94610 (FeNi29Co17),29HК Kovar, KV-1,29HК-BИ, IWerkstoff Nr.1.3981
Le ngxubevange ikwadale iglasi etywiniweyo nelawulwayo.Ingxubevange ine ulungelelwaniso lomgama ngokufana naleyo yeglasi yesilon boron enzima kwi-20-450 ° C, a Indawo ephezulu yeCurie, kunye nozinzo olulungileyo lobushushu obuphantsi. Ifilimu ye-oxide ye-alloy ixinekile kwaye ingalunga ndimanzi by iglasi . Ayisebenzisi imercury kwaye ilungele ukusetyenziswa kwiimitha zokukhupha eziqulethe i-mercury. Yeyona nto iphambili yokutywina izixhobo zombane.
Ukuhlanganiswa kweKhemikhali ye-Kovar
C Kr Ni Mo Hayi Mnu P S Fe Co Cu
-0.03 -0.2 28.5-29.5 -0.2 -0.3 -0.5 -0.02 -0.02 ibhalansi 16.8-17.8 -0.2
Kovar Iimpawu zomzimba
Ukuxinana (g / cm3) Ukuqhutywa kobushushu (W / m · K) Ukuxhathisa ngombane (μΩ · cm)
IKovar Umndilili wokwandiswa komlinganiso
Umndilili womlinganiso wolungelelwaniso lomlinganiso a, 10-6 / oC
I-Kovar ye-avareji yomlinganiso wolungelelwaniso lomlinganiso kumgca
Iingxubevange zamaBanga Inkqubo yonyango lobushushu Umndilili wokulinganisa wokulingana we-α, 10-6 / oC
UKovar 20-300 oC 20-400 oC 20-450 oC
Kwimo ye-hydrogen evuthayo ifike kwi-900 ± 20 oC, i-1h yokugquma, emva koko yatshisa i-1100 ± 20 oC, i-15min yokugquma, ukuya kuthi ga ngaphezulu kwe-5 oC / min inqanaba lokupholisa ukuya ngaphantsi kwe-200 oC ikhutshiwe ----- 4.6-5.2 5.1-5.5
I-Kovar yokwanda komlingani mlinganiso
Iingxubevange zamaBanga Umndilili womlinganiso wolungelelwaniso lomlinganiso a, 10-6 / oC
UKovar 20-200oC 20-300 oC 20-400oC 20-450oC 20-500oC 20-600oC 20-700oC 20-800oC
Imveliso ye-Kovar Alloy ekhoyo kwiiSekonic Metals
IiKovar neeBhari kunye neentonga
Iphepha kunye neplate yeKovar
Ityhubhu engenamthungo kunye neTyhubhu yeCaplliary
Umtya weKovar kunye nekhoyili
Kutheni u-Inconel Kovar?
I-1.Kovar inokusetyenziswa okubanzi kumzi mveliso we-elektroniki, ezinje ngamalungu esinyithi abotshelelwe kwiimvulophu zeglasi. La malungu asetyenziselwa izixhobo ezinje ngemibhobho yamandla kunye neetyhubhu ze-X-ray, njl.
2.Kumzi mveliso we-semiconductor kovar isetyenziswa kwiiphakheji ezitywinwe ngophawu lwezixhobo zesekethe ezidityanisiweyo nezingafaniyo.
I-3.Kovar ibonelelwa ngeendlela ezahlukeneyo ukulungiselela ukuveliswa okusebenzayo kwezahlulo zentsimbi ezahlukeneyo. Inempawu zokukhulisa ubushushu ezihambelana nezo zeglasi enzima. Isetyenziselwa ukudibanisa ukudibanisa phakathi kwesinyithi kunye neglasi okanye iiseramikhi.
Ingxubevange ye-4Kovar yincutshe enyibilikisiweyo, i-iron-nickel-cobalt, i-alloy ekwandiseni okuphantsi ekubunjweni kwayo kweekhemikhali kulawulwa ngaphakathi kwemida emxinwa ukuze kuqinisekiswe iipropathi ezifanayo zokwandiswa kwe-thermal. Ulawulo olusemgangathweni olusemgangathweni luqeshwe ekwenziweni kwale ngxubevange ukuqinisekisa iipropathi ezifanayo nezomatshini ukulungiselela ukuzoba okunzulu, ukunyathela kunye nokwenza ngomatshini.
Indawo ye-Kovar Alloy yesicelo:
● I-alloy ye-Kovar isetyenziselwe ukwenza amatywina e-hermetic ngeglasi zePyrex ezinzima kunye nezinto zodongwe.
● Le ngxubevange ifumene usetyenziso olubanzi kwimibhobho yamandla, kwimibhobho ye-microwave, kwii-transistors nakwidayode. Kwiisekethe ezidibeneyo, isetyenziselwe ipakethi ethe tyaba kunye nepakethe yomgca-mbini.
Egqithileyo Yenziwe ngentsimbi eshayinayo PH15-7MO
Okulandelayo: Ukwandiswa kweAlloy Invar36-4J36 Sheet / Bar / Strip / Tube
I-Mumetal SuPermalloy (1J85) ishidi / I-StrIP / ibha / iRingi
iringi yesitayile, Isitayile 6B, Isitayile 6, Yenza ingxubevange R26 evulwa, Ucingo lweWelding, IHaynes 25 Intambo,